Inqubomgomo ye-RMA - iStaba Electric Co., Ltd.
IStaba Electric Co., Ltd (Imfushane njengeStaba) imikhiqizo iyaqinisekiswa ukuthi ayinazinkinga ezintweni ezibonakalayo nasekwenzeni umsebenzi ngaphansi kokujwayelekile phakathi nesikhathi sewaranti. Izibopho zewaranti zemikhiqizo eyenziwe ngezifiso ziphethwe yizinkontileka ezihlukile futhi azimboziwe kulo mbhalo.
Isikhathi sewarantiNgokuvamile, uStaba unikeza iwaranti yezinyanga ezingama-24 kusukela ngosuku lokuthunyelwa. Uma isikhathi sewaranti esivumelwaneni noma i-invoyisi ehlukile sihlukile, inkontileka noma isikhathi se-invoyisi siyasebenza.
Staba Isibopho: Umsebenzi we-Staba yedwa ngaphansi kwewaranti ukhawulelwe ekulungisweni kwamaphutha kusetshenziswa izingxenye ezintsha noma ezilungisiwe, noma ukubuyiselwa kwemikhiqizo enephutha ebuyiselwe abathengi abaqondile. I-Staba iyaligodla ilungelo lokusebenzisa izinto ezingena esikhundleni sezinto zomuntu wesithathu noma izingxenye ezingasatholakali kubathengisi bokuqala.
Ukukhishwa kwewaranti: I-Staba ayithathi cala ngenxa yezimo ezilandelayo, lapho iwaranti iba yize futhi iyeka ukusebenza. 1. Umkhiqizo utholakala unephutha ngemuva kokuphela kwesikhathi sewaranti. 2. Umkhiqizo usetshenziselwe ukusetshenziswa kabi, ukuhlukunyezwa, ukunganakwa, ingozi, ukuphazanyiswa, ukuguqulwa, noma ukulungiswa okungagunyaziwe, kungaba ngengozi noma ngezinye izimbangela. Izimo ezinjalo zizonqunywa yi-Staba ngokubona kwayo okungaqondakali. 3. Umkhiqizo ulimele ngenxa yezinhlekelele noma izimo ezimbi kakhulu, kungaba ezemvelo noma ezomuntu, kufaka phakathi kepha kungagcini kwizikhukhula, umlilo, iziteleka zombani, noma ukuphazamiseka kolayini bakagesi. 4. Inombolo ye-serial kumkhiqizo isusiwe, yashintshwa, noma yacekelwa phansi. 5. Iwaranti ngeke ihlanganise umonakalo wezimonyo, noma umonakalo owenzeke ngesikhathi sokuthunyelwa.
Iwaranti enwetshiwe: I-Staba inikeza iwaranti enwetshiwe engathengwa kummeleli wethu wokuthengisa lapho ufaka i-oda. Imali ekhokhwayo yokuthenga iwaranti enwetshiwe iyenyuka, ngokuya ngentengo yokuthengisa yomkhiqizo.
Ukuze usize ikhasimende ukuthi liqalise ukusebenza okujwayelekile ngokushesha okukhulu futhi livikele izindleko kumadivayisi angonakalanga ngempela, simagange ukukusiza ngokuxazulula inkinga okukude futhi sifune yonke indlela yokulungisa idivayisi ngaphandle kwesikhathi nezindleko ezingadingekile yokubuyisa idivayisi ukuze ilungiswe. Ikhasimende lifuna inkinga, futhi lixhumane nabamele abezentengiso be-Staba noma ukwesekwa kwezobuchwepheshe ngokunikeza incazelo eningiliziwe yenkinga ngamagama, izithombe, kanye / noma amavidiyo. UStaba wenza imizamo engcono kakhulu yokuxazulula inkinga okude.
UStaba wamukela kuphela izinzuzo ezivela kubathengi abaqondile. Uma uhlangabezana nenkinga ngomkhiqizo wethu sicela ubuyele lapho uthenge khona.
Inombolo ye-RMA: ngaphambi kokubuyisa imikhiqizo enesici, ikhasimende kufanele lixhumane nommeleli wethu wokuthengisa ngefomu le-RMA ngenombolo egunyaziwe ye-RMA, bese ligcwalisa bese lithumela kubamele abathengisayo noma ku-info@stabamotor.com. Qaphela ukuthi inombolo ye-RMA kufanele ikhonjiswe ngaphandle kwawo wonke amaphakheji abuyisiwe. I-Staba inganqaba ukuhlinzekelwa ngokulungiswa noma ukushintshwa komkhiqizo ngaphandle kwe-RMA bese ibuyisela umkhiqizo kwiKhasimende ngeqoqo lezimpahla.
Ukuphelelwa yisikhathi: I-RMA isebenza izinsuku ezingama-30 (30) zekhalenda ngemuva kokukhishwa kwayo ngu-Staba. Amakhasimende kufanele abuyise umkhiqizo ochazwe ku-RMA zingakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu (30) noma kuzodingeka i-RMA entsha.
Isidingo sephakheji: Yonke imikhiqizo ebuyisiwe kufanele ihlanganiswe ngokufanele ukuvimbela ukulimala kokuthumela.
Ukuzimisela kwesimo sewaranti: Lapho umkhiqizo usutholakele, iStaba inquma isimo sewaranti ngokubheka izinombolo ze-serial nokuhlola izinto. Into yewaranti kufanele ilungiswe noma ibuyiselwe ngaphandle kokuxhumana namakhasimende. Uma into engeyona iwaranti idinga ukulungiswa ikhasimende lithunyelwa ifomu Lokulinganisela Amacala abangalihlola futhi balisayine uma kwamukeleka. Izinto ezingezona iwaranti ngeke zilungiswe ngaphandle kwemvume ebhaliwe yekhasimende. Uma into ithathwa njengengalungiseki ikhasimende lithintwa futhi linenketho (1) yokuthi umkhiqizo ubuyiswe noma (2) ukuthi umkhiqizo usulwe.
Ilungisa Imali: Into yewaranti kufanele ilungiswe mahhala. Into engeyona iwaranti kufanele iphathe imali yezinto zokwakha kanye nezimali zokulungisa uma kudingeka.
Izindleko Zezimpahla: uma kwenzeka iwaranti, iKhasimende lizokhokha imithwalo engenayo yomkhiqizo obuyisiwe kanti iStaba izokhokha imithwalo ephumayo yomkhiqizo olungisiwe noma oshintshiwe kwiKhasimende; uma kwenzeka kungaphandle kwewaranti, ikhasimende kufanele likhokhe izindleko zezimpahla ezingenayo neziphumayo.
Izingxenyekazi zekhompyutha ezilungisiwe noma ezifakwe esikhundleni sazo zizoqinisekiswa isikhathi esisele sewaranti yokuqala noma izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90), noma yikuphi okude. Inqubomgomo kungenzeka iguqulwe ngokubona kukaStaba, nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesaziso sangaphambilini.
Isithuthuthu, I vacuum cleaner, I-Brushless Motor, Isithuthuthu se-BLDC, Brushless DC Motor, I-BLDC Fan Motor, nophenyo pricelist